Ifektri Yezemidlalo Yangaphandle - Abakhiqizi Bezemidlalo Basezangaphandle, Abahlinzeki
I-GPS Tracker / Ingane / GT-C05
I-GPS Tracker / Ingane / GT-C04
GPS Tracker / Imoto / GT-V03
Isipikha se-Bluetooth / ephathekayo / BS-P08
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS09
Isihlanzimoyeni / Imoto / AP-C01
Isihlanza Umoya / Sterilizer / AP-S06
Ukutshala Kwezitshalo / PGL16
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL12
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL11
Ukutshala Kwezitshalo / PGL06
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS01
Isipikha se-bluetooth esihlanganisiwe ikakhulukazi semidlalo yangaphandle, icwecwe elincane, ubufakazi bamanzi asezingeni eliphezulu, anti-dropping, anti-dust, busebenzela indawo enobubanzi obungu-10m. Ngebhetri eyakhelwe ngaphakathi ingasebenza kuze kufike ku-6hrs. Ingasetshenziselwa nesipikha esiphathekayo, ekamelweni lokulala, ehhovisi noma epikinikini.
Ukudlala kwe-Bluetooth, ukusekela ifomethi enkulu ye-MP4 / WMA / WMV, umsindo osindayo we-bass. Isixazululo se-Bluetooth version 5.0, siletha ukudluliswa komsindo okuzinzile ngokweqile. I-99% yedivayisi ye-bluetooth iyahambisana, noma ngabe yi-smart phone tablet, noma i-laptop ejwayelekile konke kuyahambisana. Kuyindlela enhle yokuhamba.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS02
Umklamo wesipikha we-bluetooth wemidlalo yezemidlalo yangaphandle, umsebenzi we-TWS 1 + 1 uphindwe kabili umsindo osindayo, ngokwakhiwa kwebhethri kungasebenza kuze kufike ku-6hrs. Futhi ukubiza ngesandla mahhala okulula kwakho endleleni yokuhamba.
Ixhasa ukudlala kwe-bluetooth nokudlalwa kwamakhadi we-TF, nomculo wefomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Ngohlobo lwe-bluetooth 5.0 asizange sikhathazeke ngokuthengiselana okuhle kakhulu. Futhi umsebenzi wawo wobufakazi bamanzi, ukwehla kokulwa, uthuli oluphikisayo lukwenza kube into enhle kakhulu yomculo yezemidlalo yangaphandle. Vele ungayisebenzisa ekhaya, ehhovisi futhi, noma kuphi lapho uyidinga khona.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS03
Le modeli yesipikha se-bluetooth imidwebo yesimanje yesimanje ngaphandle nokuhlanganiswa kwemisebenzi eminingi. Idizayinelwe imidlalo yangaphandle, ubufakazi bamanzi, uthuli olulwa nokuwisa okuphikisayo. Awuzange ukhathazeke ngakho uma udlala ngaphandle.
Xhuma izipikha ezi-2 ndawonye, ​​bezizodlala ndawonye ngasikhathi sinye. Njalo lapho kuvulwa izipikha ezimbili ze-Bluetooth ezingenazintambo, zizoxhunywa zodwa ngaphambi kokuba zixhumeke kunoma yimaphi amanye amadivayisi amazinyo aluhlaza okwesibhakabhaka. Noma kunjalo, isikhulumi esisodwa se-Bluetooth futhi sidlala kahle.
Isipikha seBluetooth esine-diaphragm yomshayeli oshayela ngamabili kanye ne-bass, sidlala ngokuhambahamba okukhazimulayo, mids enemininingwane namabhasi acebile. Ngisho nakwivolumu ephezulu, ngendlela efanayo nokusebenza kwekhonsathi ebukhoma. Ngomsindo we-HD 360 ° weqiniso, jabulela umuzwa omnandi womculo okulethela wona.
Iyatholakala ngokudlala nge-bluetooth, ukudlala kwamakhadi we-TF, ukudlala kwe-U-disk nokudlala kwe-AUX, ubuchwepheshe be-bluetooth 5.0 kwenza ukuthi kube nokusetshenziswa okuphansi kepha uxhumano olusheshayo noluzinzile kakhulu ngedivayisi, ifoni, amakhompyutha, i-tablest, ama-TV njll.
Ngaphandle kwalokho inomsebenzi wokushaya ucingo wamahhala nomsebenzi we-FM, okuningi ukukusebenzela. Ngisho nebhande elihle unazo izindlela ezi-3. Isipika se-bluetooth esihlakaniphile ngempela.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS04
Thatha umucu wayo wokulenga, ungawuthatha uye kwezemidlalo ngaphandle noma kuphi, ukuphonsa anti, uthuli olulwa nobufakazi bamanzi. Kungaba ukudlala kwe-bluetooth, ukudlala kwe-U-disk, ukudlala kwekhadi le-TF nokudlala kwe-AUX. Ungajabulela umculo, i-movie nemidlalo. Ngezipikha zayo ze-TWS nochungechunge lwe-1 + 1 ungajabulela kakhulu umculo womphumela we-HIFI
Ingasetshenziswa njengebhange lamandla ophuthumayo lapho ifoni yakho nekhompyutha yakho zidinga amandla. Futhi insiza yezingcingo yamahhala yakho. Kuyindlela enhle yokuhamba nawe ongaphandle.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS05
Lesi sikhulumi sombala we-bluetooth esikhanyayo sinenhlanganisela yemisebenzi eqinile, ukudlala i-bluetooth, ukudlala kwekhadi le-TF, ucingo lwamahhala, umsebenzi we-flashlight, umsebenzi webhange lamandla, umsakazo we-FM. Yenzelwe ezemidlalo zangaphandle, imvula elwa nokulwa, uthuli olulwa nokudonswa kwama-anti. Kubuye kube nesikhathi sokuzilibazisa nomsebenzi wehhovisi.
Isekela ukufometha komculo we-MP4 / WMA / WMV okujwayelekile nokudlala. Ngesisombululo se-bluetooth 5.0 + EDR, siletha ukudluliswa komsindo okuzinzile ngokweqile, okuphindwe kathathu ukudluliswa kwejubane okujwayelekile. Futhi i-subwoofer diaphragm, i-double bass diaphragm, ikhombisa umsindo wefrikhwensi ephansi, okwenza ama-bass anamandla ngokwengeziwe.
Umsebenzi wokukhanyisa ithoshi we-LED, izindlela ezi-3 zokusebenza: ukukhanya okuphezulu / okuphansi kanye ne-SOS, kuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho ngaphandle. Kukuhlaka lwebhayisikili kanye ne-buckle, ungakhipha ucingo lwasimahla ukujabulela umculo lapho ugibele noma ulalele umsakazo we-FM.
Inomsebenzi oyingqayizivele, ukuthi isikhulumi singakwazi ukukhumbula isikhundla sokudlala kokugcina kusuka ekhadini le-TF bese sidlala ngokuzenzekelayo kusuka lapha.
Ngebhethri 4000mAh, isebenza njengebhange lamandla nakocingo lwakho noma kudivayisi kagesi lapho kuphuthumayo. Ibhethri lomthamo omkhulu lisekela kuze kufike kumdlalo wokudlala umculo we-10hrs. Isipika esihle semisebenzi eminingi semidlalo yangaphandle.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS06
Lesi sikhulumi semodeli se-bluetooth senzelwe imibala ekhanyayo yokukhetha. Kungadlalwa i-bluetooth, kudlalwe i-U-disk, kudlalwe ikhadi le-TF kudlalwe i-AUX. Itholakala kumculo wefomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Ngesisombululo se-bluetooth 5.0, iyahambisana namadivayisi we-bluetooth angama-99%, futhi iletha ukudluliswa komsindo okuzinzile kakhulu. Futhi i-subwoofer 3D HIFI yayo ezungeze umsindo nokuxhumana kwe-TWS 1 + 1 ikwenza ukwazi ukujabulela umphumela omuhle ongaba yisikhulumi se-bluetooth.
Yenzelwe ikakhulukazi ezemidlalo zangaphandle, imvula elwa nokulwa, uthuli oluphikisana nokudonswa kwama-anti. Iphinde ifanele isikhathi sokuzilibazisa nomsebenzi wehhovisi. Hhayi umculo kuphela, uyatholakala nakwi-FM.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS07
Isipikha se-bluetooth esingaphandle kokuklanywa okuhle nombala futhi nesandla esihle sokuzwa abicah sisongwe. Kukusebenza okuhlanganayo kokudlala komculo, ucingo lwamahhala, umsakazo we-FM kanye nezibani zethoshi ze-LED. Ungadlala umculo ngokuxhumeka kwe-bluetooth, i-U-disk, ikhadi le-TF nokuxhuma kwe-AUX, okutholakala ngefomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Ngesixazululo se-bluetooth 5.0 awuzange ukhathazeke ngokudluliswa okusheshayo, uzokujabulela isivinini esisheshayo esisheshayo nomsindo osindayo webhasi.
Kungokwezemidlalo yangaphandle, ubufakazi bamanzi, uthuli oluphikisayo nokuwisa. Isibani se-LED sinamamodi ama-3, akhanyayo, abuthakathaka ne-SOS, anelisa sonke isidingo sakho lapho ungaphandle.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS08
Isipikha esihle esimibalabala se-bluetooth ngokusobala semidlalo yangaphandle. Kungaba umnikazi osethelwe ukukhweza ibhayisikili ukuze kususwe okulula. Amanzi ama-anti, ukwehla anti, uthuli olwa anti. Ukukhanya kwesibani se-LED kunezindlela ezi-3, eziqinile, ezibuthakathaka ne-SOS, ezanele izidingo zakho zemidlalo yangaphandle.
Ungajabulela umsindo ozungezile we-subwoofer 3D HIFI. Yamukela i-wavy unibody low frequency impulsator, inciphisa umsindo wezwi. I-Louder, izinzile futhi inamandla.
Ungajabulela i-movie, izingoma nomsakazo we-FM ngayo. Kutholakalela ukudlala i-bluebooth, ukudlala kwekhadi le-TF nokudlalwa kwe-AUX futhi kuyatholakala ngefomethi ejwayelekile ye-MP4 / WMA / WMV. Kuzoba ukuhambisana okuhle ngaphandle. Vele kuyatholakala kwezokungcebeleka nasehhovisi futhi.
Lesi sipikha se-bluetooth esenziwe ngesitayela sithandwa okokuqala ngokubonakala kwaso. Ukukhetha okuningi okuhle kwemibala, imibala ehlukile yokufihla iyifanela kahle imisebenzi yangaphandle, nokuma okuhlukile kwesitayela, igobolondo uhhafu wendwangu engangenisi manzi indwangu uhhafu wesandla esihle sokuzwa ukumboza injoloba, ibhande lesikhumba lesandla. Iphinda kabili injabulo yakho lapho uyisebenzisa.
I-subwoofer yayo ye-3D HIFI ezungezile enezipikha ezikabili izokwenza uyijabulele kakhulu. Umphumela womsindo we-stereo onama-bass aphelele — isikhulumi siletha umsindo ogwilizayo onama-bass acebile, ama-mids nokuphakama, umsindo womphumela onamandla. Ngisho ivolumu ephezulu, ngendlela efanayo ne-cinema. Uzoyithanda i-360 ° Stereo Sound yayo yangempela. Itholakala ukudlala i-bluetooth, ukudlala i-U-disk, ukudlala kwekhadi le-TF nokudlala kwe-AUX. Ungajabulela ifomethi yomculo we-MP4 / WMA / WMV, i-movie nezingcingo zezandla zamahhala.
Isizukulwane esibuyekeziwe sobuchwepheshe be-Bluetooth 5.0, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kunakuqala kwe-Bluetooth 4.2 kepha ngokudluliswa okusheshayo, amandla okulwa nokuphazamiseka anamandla nesiginali ezinzile ngaphandle kokulibala. Lesi sipikha sihambisana namadivayisi amaningi njengamathebulethi, ama-laptops, amakhompyutha wedeskithophu nomakhalekhukhwini.
Yenzelwe ezemidlalo ngaphandle, imvula ephikisayo, uthuli lokulwa nokudonswa kwama-anti. Isipikha esiphathekayo asinantambo ukuze ulalele umculo ngesikhathi sokuzijabulisa kwakho kwangaphandle nokuhamba. Impela izikhwama zesikhathi sokuphumula nehhovisi nazo.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS10
Lesi sikhulumi semodeli se-bluetooth senzelwe ushukela we-cube, kepha wonke amakhona ayindilinga, isithombe esihle kakhulu, futhi sifana nemibala egqamile yokufihla. Inezikhulisazwi ezimbili ezingama-52mm ngaphambili nangemuva, ezikhipha umsindo ngefilimu ekhethekile, okwenza umculo ube yi-3D futhi icace bha.
Idizayinelwe ikakhulukazi umdlalo wangaphandle onentambo yesandla namanzi okulwa, uthuli olulwa nokulwa. Ungayisebenzisela isikhathi sokuzilibazisa nasehhovisi futhi, ujabulele ama-movie nomculo a ube nezingcingo ezingenazandla nezihlobo nabangane. Izokulethela impilo engcono.
Itholakala ukudlala i-bluetooth, ukudlala i-U-disk, ukudlala kwekhadi le-TF nokudlala kwe-AUX. Ngesixazululo se-bluetooth 5.0, iyahambisana namadivayisi we-bluetooth angama-99%, futhi iletha ukuhanjiswa komsindo okuzinzile kakhulu, kuqinisekisa umphumela wekhwalithi esindayo yekhwalithi.
Isipikha seBluetooth / Ezemidlalo zangaphandle / BS-OS11
Lesi sikhulumi semodeli esinxantathu sesilinda esimile se-bluetooth senzelwe ezemidlalo zangaphandle, ngentambo yamahlombe eguquguqukayo, ubufakazi bamanzi, uthuli olulwa nokulwa. Ungajabulela umculo ngenkathi ususa izintaba noma uhamba izintaba, noma ujabulela izingcingo zamahhala ngenkathi izandla zakho zimatasa.
Inebhetri enkulu yokuthwala, futhi umsindo wayo ozungezile we-subwoofer 3D HIFI ukuvumela ukuthi uthokozele umthelela omuhle ongaba yisipikha se-bluetooth. Uzojabulela ngokugcwele isikhathi sakho sokuhamba noma sokuzilibazisa.
Kungadlalwa i-bluetooth, kudlalwe ikhadi le-TF, kudlalwe i-U-disk kudlalwe ne-AUX. Itholakala kumculo wefomethi ye-MP4 / WMA / WMV. Ngesisombululo se-bluetooth 5.0, iyahambisana namadivayisi we-bluetooth angama-99%, futhi iletha ukudluliswa komsindo okuzinzile kakhulu.
Khulisa ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Khulisa i-Lightin, Isitshalo sikhule ukukhanya,